Yan Aung: My Country/တို့တိုင်းပြည်
While I’m browsing internet reading some blogs by Burmese bloggers,astream of thoughts hopped into my head. We, young students, broke through the barriers posted by the junta government for our future education and better lives even if the challenges and interests are at stake. We manage to lead our own lives proudly while keeping abreast with other nationalities in the world. If our country were freed from the shadow of military dictatorship, it will not feel ashamed for its lost dignity like today.
It doesn’t make sense at all! It’s ridiculous! It’s absurd! It’s an abysmal situation! I feel so sorry for those scholars who don’t haveasingle chance to apply their knowledge for the better of their lives and for their country.
May the misleading junta administration be exempted from ignorance and greed and sleep safe and sound….
May our country, Burma, prosper and retain the long-lost honor of the peacock…
With those wishes in my heart, I have to make sure if my feet are firm on the spot where I am standing now…
ညဘက်ဟိုဟိုသည်သည် online မှာ လျှောက်ကြည့်နေရင်းနဲ့ မြန်မာ Bloggers အချို့ရဲ့ Blog တွေကို ဖတ်ရင်း အတွေးတစ်ခုဝင်လာတယ်။ သြော်. ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဟာ ဖိနှိပ်မှုတွေ ရှိတဲ့ ကြားထဲကကိုဖောက်ထွက်လာနိုင်တယ်။ ဘ၀မှာ ပညာနဲ့ လက်မထောင်နိုင်တယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ ရင်ကော့ခေါင်းမော့နေနိုင်ကြတယ်။ တကယ်လို့သာ လွတ်လပ်တဲ့ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တိုင်းပြည် ကမ္ဘာမှာ ခုလောက် အောက်ကျနောက်ကျဖြစ်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။
ခံပြင်းတယ်ဗျာ။ ပြည်တွင်းမှာ ပိတ်မိနေတဲ့ Scholar တွေအတွက်လည်း ရင်နာတယ်။ မောဟအမှောင်တွေဖုံးလွှမ်းနေကြသူတွေ ငြိမ်းချမ်းစွာ အိပ်စက်အနားယူနိုင်ကြပါစေ။ မြန်မာနိုင်ငံကြီး သာယာဝပြောနိုင်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းရင်း ကိုယ့်ရဲ့ ခြေထောက်ကို ခိုင်အောင်အားဆက်တင်းနေရတယ်ဗျာ။